Adobe Portfolio: Vaka uye Tora Yako Online Portfolio | Martech Zone
Svondo, Kubvumbi 24, 2016 Svondo, Kubvumbi 24, 2016 Douglas Karr
Adobe ari kunyatso kukanda yavo online mutambo kumusoro notch. Isu tanga tichishandisa Creative Cloud kweavo makore akati wandei uye tichizviwana isu tichigamuchira Adobe matekinoroji zvakanyanya uye nekuwedzera. Iye zvino Adobe yakatanga yazvo Portfolio saiti, mhinduro yakakwana kune avo vavanotarisa vateereri nevamiriri. Pamusoro pekushandisa rako rezita zita, Adobe's Portfolio mupepeti inopa zvinotevera zvinhu:
Pamusoro pekushandisa rako rezita zita, Adobe Portfolio inopa zvinotevera maficha:
upindo Typekit's raibhurari yemafonti.
Kurarama kurongedza kunoita kuti iwe uone shanduko dzako sezvaunozviita.
Kuwana zvakananga: Chero chinhu chaunogona kuona, unogona kugadzirisa.
Wongorora webhusaiti yako zvine mutsindo pane desktop, piritsi uye nhare.
Gadzira mapurojekiti pane Portfolio kana Behance uye kuyananisa pakati pezviviri.
Sarudzo yekudzima kurudyi-tinya kuchengetedza ako mifananidzo.
Sarudzo yekugonesa lightbox mharidzo yemifananidzo yako.
Ipuratifomu yatove nezvimwe zvakanaka, nhare-yakagadzirira, inoteerera madingindira anosanganisirwa:
Tags: kupiswaadobe portfoliomaitiroonline portfolioPortfolioportfolio saititypekit